Fiesta de los Patios de Córdoba, runako rwemaruva echirimo | Kufamba Nhau
Mutambo wePatios yeCórdoba
Luis Martinez | | Córdoba, tsika nemagariro
Mutambo wePatios de Córdoba ndeimwe yepakutanga pane zvese zvinoitwa gore rega rega muSpanish ndima. Yakabatana zvakabatana ne primavera, kana uswa hwasvika pakuzara kwazvo, zvakaziviswa nezvazvo National Yevashanyi Kufarira.
Senge kuti izvo zvaive zvisina kukwana, mu2012 zvakare yakagamuchira mutsauko we Isingaonekwe Nhoroondo Yevanhu mumunda wetsika neUNESCO. Uye izvo ndezvekuti iko kukwidziridzwa kwese kwekunaka kwechisikigo. Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezve Patios de Córdoba, tinokukoka kuti uenderere mberi nekuverenga.
1 Nhoroondo diki yemutambo wePatios de Córdoba
2 Chii ichocho?
3 Fiesta de los Patios de Córdoba inopembererwa rini?
4 Iwe unofanirwa kubhadhara kupinda?
5 Mabasa ekuwedzera
6 Ungasvika sei kuCórdoba?
Nhoroondo diki yemutambo wePatios de Córdoba
Uyu mutambo une mavambo awo mune idiosyncrasy yedzakajairika dzimba dzeCordovan. Mamiriro ekunze akajeka enzvimbo iyi akatungamira vaRoma kutanga uye maMuslim mushure mekuvaka dzimba dzavo kutenderedza a chivanze chepakati uko kwavakaita zvakanyanya zvehupenyu hwavo hwepamba.
Nekudaro, yekutanga edition yemutambo uyu yakaitika mu 1921. Izvo hazvina kudzokororwa kutozosvikira makore matanhatu gare gare, asi zvakatanga kuve mukurumbira muna 1933, apo matare gumi nematanhatu akapinda mumakwikwi.
Kuvhiringidzwa neHondo Yenyika, yakadzoswazve muna 1944. Kubva ipapo zvichienda mberi, kukosha kwemubairo kwakawedzera, nepo nzira nyowani dzekuongorora dzakawedzerwa senge dzakasiyana siyana dzemaruva uye mwenje wepanyama.
Sezvatakaratidza, muna 1980 yakaziviswa Mutambo weNyika Yevashanyi Kufarira uye muna 2012 Isingaoneki Nhoroondo yeVanhu. Parizvino, iyo Fiesta de los Patios de Córdoba ndeimwe yevakakurumbira muAndalusia yese uye inounza pamwechete. vanopfuura miriyoni vashanyi kudisisa kunakidzwa neruva rekunaka kwepatio.
Cordoba patio ine maruva kushongedzwa
Sezvo zita rayo rinoratidzira, iyo Fiesta de los Patios de Córdoba iri makwikwi emaruva. Nzvimbo dzepakati pedzimba dzekare dzakashongedzwa zvinoshamisa kushongedzwa kwemuriwo Zvekunaka kukuru. Minda yemizambiringa, hari dzemaruva uye zvimwe zvakawanda zvekushongedza zvinoumba yakanaka yekushongedza ensembles zvinoenderana nezvakasikwa.
Idzo nharaunda huru dzaunogona kushanyira idzi patios ndidzo dze Old Alcazar, iyo iri chaizvo pakati peAlcázar nechechi yeSan Basilio; kubva Santa Marina, kutenderedza Magdalena neSan Lorenzo; ye Mosque; ye Judhiya, inova ndeipi yekare kwazvo, uye iyo ye Viana muzinda. Iyo yekupedzisira inofanirwa kutaurwa kwakaparadzana, nekuti mumuzinda mega pachawo mune gumi nemaviri mavanze akasiyana, imwe neimwe yakashongedzwa nemaruva ayo.
Kune rimwe divi, kune maviri marudzi emapatio. Zvimwe zvakanyanyisa, ndezve dzimba dzemhuri imwe chete uye ivo vanowanzove nevhavha uye yakavezwa kana yakashongedzwa mosaic pasi. Kana vari vamwe, ivo vari mukati dzimba dzevavakidzani vakati wandei uye kazhinji pamatanho maviri ane mabhaconi kumapatio pachawo. Ichi chiitiko chekupedzisira chinokutendera kuti uzvishongedze zvakanyanya kutora mukana iwo iwo nzvimbo.
Nezve izvo zvataurwa pamusoro, iwe unofanirwa kuziva kuti vagari venzvimbo dzekugara pachavo vanotora mukana mumakwikwi. Ndivo ivo vari pamusoro pekushongedza mapatio avo. Pane zvikamu zviviri: chivanze chechivanhu uye izvo zve yadhi yemazuva ano yekuvaka. Asi ivo vanogona zvakare kunyoresa kunze kwemakwikwi, kungo ratidza runako rwavo kuruzhinji runopinda chiitiko.
Kubudirira kwemutambo wePatios de Córdoba pakati pevagari veguta kunokupa iwe pfungwa yekuti dzimba dzinosvika makumi mashanu dzinowanzo pinda mumakwikwi. Kune izvi zvinowedzerwa mamwe gumi kana gumi nevaviri vasingatore chikamu mumakwikwi.
Patio akarongedzerwa kunze kumafaro
Fiesta de los Patios de Córdoba inopembererwa rini?
Sezvatakakuudza, zororo iri rakanyanya mwaka wechirimo. Zvisinei, shanduro yekupedzisira yakaitwa mukuwa. Denda reCovid-19 rakamanikidza kuti riendeswe mberi kusvika muna Gumiguru, kunyanya pakati pegumi nemasere kusvika gumi nemana wemwedzi iwoyo. Nekudaro, kana pasina nhau, iwe unozogona kunakirwa iyo 8 edition inotevera swimsuit. Uye misi yakapihwa mukati mayo ndeye kubva pa3 kusvika 16.
Iwe unofanirwa kubhadhara kupinda?
Kuti unakirwe nerunako rwezvirimwa zvepatio yeCórdoba, haufanire kubhadhara mari yekupinda. Kushanya kuri vakasununguka, sezvo kufarira kwevatori vechikamu kuri kuhwina mumakwikwi, asiwo kuratidza basa ravo rekushongedza.
Chero zvazvingaitika, tinokukurudzira kuti uvashanyire uchiperekedzwa ne gwara remunharaunda. Izvi zvinokuzivisa zvizere nezvese zvinhu zvine chekuita nebato uye zvinokuendesa kumakona akanaka kwazvo.
Panguva imwechete iyo mutambo wePatios de Córdoba uri kupembererwa, kutenderera kwe kuita kwevanhu izvo zvinounza pamwechete vaimbi vakanyanya kana vatambi munzvimbo iyi. Uye kuravira kwezvigadzirwa zvemuno zvakarongedzwa, kunyanya tapas uye waini kubva pazita rekutanga. Montilla Moriles.
Kana dziri dzekutanga, unogona kuravira inonaka Gazpacho, asi zvakare yakanakisa Salmorejo, mbambo mafufu kana ndiro ye gondohwe. Iyo yekupedzisira chikafu chembatatisi negariki yakakangwa uye zvidimbu zvechingwa zvinowanzo kuperekedzwa nemazai akaomeswa zvakaenzana.
Uye kupedzisa kuravira kwako kwakajairika kweCórdoba gastronomy, unogona kunakirwa neimwe maruva akaomeswa, idzo nemazita dzakakodzera kwazvo bato riri kutaurwa. Nekudaro, iri nezve hupfu hwegorosi, zai uye anise makuki. Kana iwe unogona zvakare kusarudza iyo cordovan cake, Iyo inogadzirwa nemvere dzengirozi uye puff pastry.
Patio achipinda mumakwikwi
Ungasvika sei kuCórdoba?
Kana iwe uchida kunakidzwa nemutambo wePatios de Córdoba, iwe unofanirwa kuziva kuti ungasvika sei kune inonzi Caliphal Guta. Imwe yedzakanakisa nzira dzekuita izvi ndeye njanji. Córdoba ane kumhanya kumhanya iyo inoibatanidza nechitima neMadrid, Barcelona nemamwe maguta eAndalusia akadai seSeville, Granada kana Malaga.
Nezve rwendo ne mugwagwa, iwe unofarira kuziva kuti, kana iwe ukasvika uchibva kuMadrid kana Seville, mugwagwa mukuru ndiwo Maodzanyemba Mugwagwa A-4. Nekudaro, kana iwe uchizviita kubva munzvimbo yeLevantine, semuenzaniso kubva Valencia, iyo chaiyo nzira ine iyo A-3, A-43 uye A-4 pachayo. Chekupedzisira, kana uri kufamba uchibva kumadokero, mugwagwa wakanakisa ndewe Nyika 432.
Mukupedzisa, iyo Mutambo wePatios yeCórdoba iko kuputika kwekunaka kwechisikigo. Izvo zvinoshamisa kuona nzvimbo dzakasiyana dzakashongedzwa nemaruva uye zvimwe zvishongo zvemiti. Kana iwe ukaenda kuguta reAndalusia kuti unakirwe naro, hauzombozvidemba.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » Spain maguta » Córdoba » Mutambo wePatios yeCórdoba